Layma's World: လမ်းဖောက်တဲ့အခါ
Posted by lay-ma at 3:49 AM
လမ်းသစ်ဖောက်တဲ့ အခါ အဆင်ပြေအောင် အခုတော့ မြက်ရှင်းတုန်း :P ဘော်လီဇာနဲ့ ကလော်ဖို့ ပိုက်ပိုက် စုနေတယ်ဗျ ။ ဟန်နီးမွန်းကိုတော့ ဘယ်ကို သွားရမလဲ စဉ်းစားအုံးမှ :)
မလေးမ... ဦးသာဓုရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးတယ်။ သူ့ခေတ် သူ့အခါနဲ့ဆို ဆရာကြီး ဦးသာဓုက ခေတ်မီတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။
လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေသေးလို့လား မသိဘူး ၊ အစ်မအညွန်းပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ လက်လှမ်းမမီသေးဘူး ၊ သွားရင်လာရင်း အွန်လိုင်းမှာ အဲဒီစာအုပ်တွေ မြင်မိရင် လက်တို့ဦးနော် အစ်မ :)
ထိမ်းမြားပေါင်းဖက် ရန်ဖြစ်လျက်ပင်ချစ်ကြင်နေနည်းက ဖတ်ဖူးတယ်မမ၊ ဆရာသာဓုစာအုပ်လည်းဖတ်ဖူးတယ်... နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်..။ အင်း.. အိမ်ထောင်ကျရင် စိတ်တူကိုယ်တူရှိဖို့က ရည်းစားဘ၀ကတည်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖုံးထားတာတွေ၊ ဟန်ဆောင်တာတွေမရှိမှဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ ဟီး.. နေ့အိပ်မက်ဆို ရေချိုးရင်း ဆပ်ပြာတိုက်ဖို့မေ့သွားတာကအစ တူတူနေရင် အိမ်အလုပ်ကို ဘယ်သူကဘာလုပ်ဖို့အထိ ပြောဖြစ်တယ်.... :P။ တချို့တွေက ရည်းစားဘ၀မှာဖုံးထားတာတွေ သိပ်များနေရင် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကျ အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်နော်။ နှစ်ဘက်မိဘဆွေမျိုးတွေကိစ္စကျ ညှိရမှာပေါ့နော်။ အရေးအကြီးဆုံးက နှစ်တွေကြာသွားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မငြီးငွေ့သွားဖို့ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိဖို့လိုမယ်ထင်တာပဲ...။ဟီး.. တိဝူး.. လျှောက်ပြောကြည့်တာ.. :P။
ပို့စ်ကောင်း တစ်ပုဒ် ဖြစ်မယ်... ဒါမျိုးတွေ စောင့်နေတာကြာပြီ. အစ်မတွေ ဆီက ဘယ်တော့များ အဲဒီလို ဘဝ အတွက် လမ်းညွှန်လေးတွေ ထွက်လာမလဲ လို့မျှော်နေတာ. :D
လောလောဆယ် Tick လုပ်သွားတယ်ဗျို့. အချိန်ရမှ သေသေချာချာ လာဖတ်ဦးမယ်. အစ်မရေ. :)
ကိုကြီးမှော်ဆရာလိုပဲ ပြောရတော့မယ် :)
ဒါမျိုးတွေ စောင့်နေတာ ကြာပီ :P
သေချာစွာ လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ် အစ်မလေးမရေ...
လေးမပြောထားတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ဥမ္မာရီ စာအုပ်က လွဲရင် ကျန်တာတွေ အမ မဖတ်ဖူးဘူး.. စာအုပ်လမ်းညွှန်ဖတ်မိတော့ ဖတ်ကြည့်ချင်သေးတယ်.. ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှ ပြန်ရှာကြည့်ရမယ်.. :)
နောင်တစ်ချိန်တွင်အသုံးဝင်မည်ဟု ယူဆပါသောကြောင့် :P
moetharlat pyar said...
ဒီစာကိုရေးရင်ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာမသိပါဘူးရှင့် လူကြီးတွေကိုသိစေချင်ပါတယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့နယ် မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲ ဖောင်းတောကြီး ဟင်းကဖိကျေးရွာ မှာလမ်းလာဖောက်ပါတယ် သရုပ်ဆောင်မင်းရဲဆက်လည်းပါပါတယ် လမ်းဖောက်တာအရင်ကဖောက်ပြီးသားလမ်းကိုမဖောက်ပဲ ၇ွာထဲလမ်းမှာဖောက်ပါတယ် ရွာထဲမှာဆိုတော့နွားလှည်းလမ်းကိုဖောက်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် ရွာသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စောကြာထွန်းမောင်လို့ခေါ်တဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ကွမ်းခြံထဲကိုတောင်လမ်းဖောက်ပစ်လိုက်တယ် ကွမ်းပင်ရာကဏန်းနဲ့ချီပြီးဆုံးရှုံးသွားပါတယ် အခုအဲဒီအဘိုးကြီးအရမ်းကိုစိတ်ထိခိုက်နေပါတယ် ကွမ်းပင်တစ်ပင်ကိုသိန်းနဲံချီပြီးတန်တယ်လို့ကြားဖူပါတယ် ရာကဏန်းနဲ့ဆုံးပြီးတော့လျော်ကြေးလဲတစ်ပြားမှမပေးဘူး ၇ွာကကရင်ရွာပါ တောင်ယာလုပ်စားတာပါ ကွမ်းခြံနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတော့ဒီလိုဆုံး၇ှုံးတာအရမ်းခံစားရပါတယ် တစ်ဆိတ်လောက်ကူညီပေးကြပါရှင်